Madaxa xafiiska Mahmoud Mahmoud Abbas ayaa sheegay in qorshaha Trump uu u fidinayo gobolka ‘Swiss cheese’ | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Madaxa xafiiska Mahmoud Mahmoud Abbas ayaa sheegay in qorshaha Trump uu u...
Madaxa xafiiska Mahmoud Mahmoud Abbas ayaa sheegay in qorshaha Trump uu u fidinayo gobolka ‘Swiss cheese’
Isaga oo la hadlaya Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, Mahmoud Abbas wuxuu yiri soo jeedinta Mareykanka ‘waxay baabi’ineysaa sharcinimada xuquuqda Falastiin’.
11 Feb 2020 GMT + 3
Madaxweynaha Maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa mar kale ku celiyay diidmada Falastiin ee diidmada Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee loogu yeero qorshaha Bariga Dhexe, isagoo u sheegay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay in soo jeedinta dhowaan la soo saaray uusan keenaynin nabad iyo xasillooni wuxuuna ka tegayaa Falastiiniyiinta xaalad la mid ah ” Farmaajo Swiss ”.
Cabaas ayaa cinwaankiisa ku sheegay Talaadadii, isagoo cadeeyay in mawqifkan ay sidoo kale taageereen Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka iyo Afrikaanka. Midow.
Ku dhawaaqista qorshaha Bariga Dhexe ee Trump: Maxaa hadda?
Maxay dawladaha carabtu ‘ugu kala qaybsameen’ wajigii qorshaha Trump?
Qorshaha Trump ka dib, xulashooyin noocee ah ayay leeyihiin hoggaamiyeyaasha Falastiin?
Cabaas waxa uu ugu yeedhay Trump inuu ku laabto wadahadalada ku saleysan qaraarada Qaramada Midoobay ee jira oo ku baaqaya in la helo xalka labada dowladood ee ku saleysan xuduudaha ka hor 1967, wuxuuna ku booriyay goluhu inuu qabto shir caalami ah oo lagu raadinaayo xalinta khilaafaadka mudada dheer socday.
Cabaas ayaa sheegay in diidmada qorshahan, oo Trump uu la wadaagay Raiisel wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu dabayaaqadii bishii hore, ay ka dhalatay “talaabooyinkeedii mideysanaa ee jabin lahaa sharciga caalamiga ah iyo dadaalka nabadeed ee Carabta”.
“Waxay baabi’ineysaa sharcinimada xuquuqda Falastiin, xuquuqdeena go’aan-ka-gaarista, xorriyadda, iyo madax-bannaanida, dowladdeena,” ayuu yiri.
“Waxay sharciyeeysay waxa sharci darada ah – degsiimooyinka iyo la wareegida iyo la wareegida dhulka Falastiin,” ayuu yidhi, isaga oo tixraacaya mashruuca ballaarinta sharci darrada ah ee Israel ee Galbeedka Galbeedka iyo Bariga Qudus.
Qorshahan, oo ah wax soo saar sedex sano ah oo uu soddog u yahay wiilka soddoga u ah ahna la-taliyaha sare Jared Kushner, ayaa mowqif ka dhex abuuray dowlad Falastiin oo wareejinaysa qeybaha muhiimka ah ee Daanta Galbeed ee Israa’iil isla markaana ka doorbideysa Israa’iil arrimaha muhiimka ah ee ay ka midka yihiin xuduudaha, xaaladda Yeruusaalem iyo degsiimooyinka Yuhuudda.
Soo jeedinta, Falastiiniyiinta waxay lahaan doonaan qaybo ka mid ah Daanta Galbeed iyo Gaza gobolka iyo caasimad cusub oo ku taal Abu Dis, oo ah agagaarka bannaanka Jerusalem. Laakiin Maamulka Falastiin wuxuu doonayaa in labada qabsatay Bariga Qudus iyo Daanta Galbeed inay qayb ka noqdaan dawlad mustaqbal.
Soojeedintan ayaa la sameeyay iyada oo aan lagala tashanin falastiiniyiinta, kuwaas oo jaray xiriirkii ay la lahaayeen maamulka Trump kadib markii ay si muran badan ku dheehan tahay u aqoonsadeen Qudus inay tahay caasimada Israel dabayaaqadii 2017.
#AJOPINION – Qorshaha Bariga Dhexe ee Trump
Qaraar qabyo ah, oo ay taageerayaan Tunisia iyo Indonesia oo ay taageerayaan wefdiga Falastiin, ayaa lagu sheegay in qorshaha Trump uu jebinayo sharciga caalamiga ah iyo in Golaha Amniga uu dalbado xalka labada dowladood ee ku saleysan xuduudaha Falastiin kahor dagaalkii 1967.
Waxay qeexi lahayd goaanka golahan “in la baaro qaabab wax ku ool ah iyo qaab lagu sugo dhameystirka fulinta go’aannadeeda la xiriira, oo ay kujirto talaabooyinka meelmarinta sida ku xusan cutubka 7aad ee Axdiga [UN],” kaas oo ka hadlaya millatariga iyo waxyaabaha aan dawliga ahayn.
Laakiin uma muuqato wax aan macquul ahayn in Falastiiniyiintu ay ku yeeshaan taageero ku filan golaha dhexdiisa si ay u codeeyaan iyada oo la soo sheegayo in qaraarka qabyada ah la joojiyay cadaadiska Mareykanka ka dib.
James Bays, James Bays, oo ka warbixinaya xarunta UN-ka ee New York, ayaa sheegay in Falastiiniyiinta iyo xulafadooda ay “gacmahooda marin habaabin”.
“Xaqiiqdii qoraalkoodii hore ee qaraarka wuxuu ahaa mid aad u dhalleeceeyay qorshaha Trump, waxaana u maleynayaa in waxaas ku qasbay Mareykanka inay u yeeraan dadka reer Tunisiya inay ceyriyaan safiirkooda,” ayuu yidhi Bays, isagoo tixraacaya ergaygii hore ee Qaramada Midoobay Moncef Baati, oo ahaa ayaa sida la sheegay shaqada laga eryay usbuucii hore markii uu socday wax ka badan inta Madaxweynaha Kais Saied uu doonayay dhaleeceyntiisa Mareykanka.
“Waxay sidoo kale walaac ku abuurtay dalalka kale ee UNSC. Waxaan u malaynayaa waxa Falastiiniyiinta aysan dooneynin inay qaraar ka gaadhaan codbixinta, oo aysan ku koobnayn Mareykanka dhinac keliya, laakiin waxay leeyihiin dalal badan ayaa ka fogaanaya,” ayuu yidhi Bays, isaga oo tixraacaya maqnaanshaha codbixinta.
Falastiin ‘rajo kama’
Khudbaddiisa, Cabaas wuxuu ku celiyay in nabad ka dhex jirta Falastiin iyo Israel “wali ay macquul tahay” oo “la gaari karo”.
“Wali waxaa naga go’an nabada sidii xulasho istiraatiiji ah, laakiin heshiiskan ma ahan iskaashi caalami ah,” ayuu yidhi.
Dhanka kale, danjiraha Israa’iil ee Qaramada Midoobay, Danny Danon, wuxuu ku eedeeyay Cabaas inuu yahay mid aan macquul ahayn.
“Madaxweyne Cabaas wuu diiday inuu noqdo wax la taaban karo. Wuu diiday inuu gorgortamo galo. Ma xiiseynayo inuu xal macquul ah ka gaadho khilaafka,” ayuu Danon u sheegay Golaha Amniga.
Hadaladiisa ayaa timid iyadoo kumanaan reer falastiin ah oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee Daanta Galbeed ay isugu soo baxeen Ramallah inay codkooda ku dhiibanayaan mowqifkooda hogaaminta iyo inay mar kale mudaaharaadaan qorshaha Trump.
Nidaamka Al Jazeera Nida Ibrahim, oo ka soo waramaya Ramallah, ayaa sheegay in siidaynta taageerada khudbaddii Cabaas ay timid inkasta oo dad badan oo reer Falastiin ahi ay dareemayaan rajo la’aan.
“Waxay yiraahdeen waxaa loo ballan qaaday sannado… majiro hal go’aan oo ay yiraahdaan in lagu fuliyay dhulka,” ayuu yiri Ibraahim.
“Ka dib ballaarinta degsiimooyinka, safaaradda Mareykanka waxay u dhaqaaqdaa… uma muuqdaan inay rajo badan qabaan. Falastiiniyiinta rajo kama qabaan in xaqiiqda dhulka ka jirta ay isbeddeleyso,” ayay tidhi.
“Falastiiniyiinta waxay rumeysanyihiin in Israel ay horeyba ula socoto qorshaha, iyo in waxa Mareykanka uu sameeyay ay tahay mid xaqiiqada dhulka loogu dhigayo warqad waxayna ugu yeereen qorshe nabadeed.”
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo Maanta Cod Aqlabiyad ah...
Tvga Dayniile Qaxooti Ajaaniib ah oo ku...
Muuse Biixi” Farmaajo ma imaan karo Hargayso,